सहि डोमेन नाम प्रयोग गर्दै - Semalt बाट SEO सुझावहरू
कुनै पनि वेबसाइटको डोमेन नाम एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दछ। यो एक्लो पनी सजीलै बनाउन वा कुनै पनि वेबसाइट को सफलता को लागी नष्ट गर्न सक्दछ। के तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को लागी सब भन्दा राम्रो डोमेन नाम तय गर्न अडिग हुनुहुन्छ? कारण वरपर रहनुहोस् हामी तपाईंलाई उत्तम रणनीतिहरू दिनेछौं जुन तपाईंलाई सही डोमेन नाम छान्न मद्दत गर्दछ जुन समयको परीक्षामा खडा हुनेछ।
जबदेखि Semalt ले वेबसाइटहरूलाई उत्कृष्ट बनायो, सही डोमेन छनौट प्राथमिकतामा रहेको छ। यसको इतिहासमा, Semalt दर्जनौं डोमेन नाम छनौट गरेको छ र यो कला को do र don'ts को एक गहिरो समझ विकसित गरेको छ।
यहाँ, Semalt ले सुझाव दिनेछ यसले यसको ग्राहकहरूको लागि दर्ता गर्ने शीर्ष-वर्ग डोमेन नामहरू छनौट गर्न प्रयोग गर्दछ।
डोमेन नामको अर्थ के हो?
एक डोमेन नाम शब्दहरूको स is्ग्रह हो जसले प्रशासनिक अधिकार, स्वायत्तता, र इन्टरनेट भित्रको नियन्त्रणको क्षेत्र परिभाषित गर्दछ। पूरा मुख जस्तो लाग्छ, हैन र? ठिक छ, तपाईको डोमेन नाम केवल शब्द वा शब्दहरूको शब्द हो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको वेबसाइट पत्ता लगाउन टाइप गर्नुपर्दछ। उदाहरण को लागी, www.Semalt.com। यस उदाहरणमा, Semalt.com एक डोमेन नाम हो।
सामान्यतया, एक डोमेन नाम एक नेटवर्क डोमेन पहिचान गर्न प्रयोग गरिन्छ वा इन्टर्नेट प्रोटोकोल श्रोत पहिचान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। डोमेन नाम दर्ता गर्न, आवेदकले एक डोमेन नाम रेजिस्टरसँग सम्पर्क गर्नु पर्नेछ जसले डोमेनको नाम सार्वजनिक गर्नका लागि सेवा बेच्दछ।
म कसरी मेरो व्यवसायको लागि सहि डोमेन नाम छनौट गर्न सक्छु?
जब डोमेन नाम छनौट गर्नुहुन्छ, तपाईं उत्तम चाहनुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रा डोमेन नामहरू ती नाम हुन् जुन तपाईंको व्यवसायलाई फाइदा पुर्‍याउँछन् र यसलाई समयको टेस्टमा उभिन सक्षम पार्दछन्। यी सर्तहरूको बैठकले धेरै कारकहरू समावेश गर्दछ, र हामी सकेसम्म धेरै छलफल गर्नेछौं। यहाँ कारकहरू जुन तपाईले प्रयोग गर्नु पर्ने हो आफ्नो दिमाग बनाउनु अघि कुन डोमेन नाम तपाई प्रयोग गर्नुहुन्छ।
व्यवसायले डोमेन नामको स्वामित्व पाउँदैन
मुख्य नियम मध्ये एउटा यो हो कि जुनसुकै डोमेन नाम तपाईले प्रयोग गर्न रोज्नुहुन्छ, तपाई केवल यसलाई रेजिष्टर गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई किन्नुहुन्न। कसैले पनि वास्तवमा डोमेन नामको स्वामित्व राख्दैन, कम्तिमा तपाईको व्यवसाय वा कारको स्वामित्वमा त्यस्तो छैन।
धेरै चोटि, व्यवसाय मालिकहरूले उनीहरूको डोमेनहरूको साथमा स्वामित्वको गलत भावना विकास गर्दछन्। जे होस् यो सही जीवनको नाम छनौट गर्नको लागि अन्तिम जीवन ह्याक जस्तो लाग्दैन, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईंले यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ जब तपाईं अन्तमा तपाईंको डोमेन नाम दर्ता गर्नुहुन्छ।
तपाईंको डोमेन नाम र व्यवसायिक नामको मिलान गर्दै
तपाइँको डोमेन नाम र उही अक्षरहरूमा तपाइँको व्यवसायको नाम राख्नु पूर्ण रुपमा वैकल्पिक हो। केहीले यो गर्न छनौट गर्छन्, जबकि अरूहरूलाई यो आवश्यक पर्दैन। गुगलको डोमेन नामहरू अक्षरको स्वामित्वमा छन्, जुन अर्को व्यवसाय हो। यद्यपि Google लाई वर्णमालाको नाम दिइएको छैन। यसले तपाईंको डोमेन ब्रान्ड अर्को कम्पनीको स्वामित्वमा राख्न सम्भव बनाउँदछ।
अर्कोतर्फ, तपाईं तपाईंको अनलाईन व्यापारलाई तपाईंको व्यापारको नाम जस्तो समानको साथ ब्रान्ड गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईंको मार्केटि approach दृष्टिकोण सुझाव दिन सक्छ कि पृष्ठभूमिमा तपाईंको कम्पनीको नाम राख्दा तपाईंलाई आफ्नो ब्रान्ड निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
यो निर्णय लिँदा, तपाईंले आफ्नो व्यवसायको प्रकृतिलाई विचार गर्नुपर्नेछ। एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रूपमा, चिन्ता गर्न त्यहाँ कम छ। स्थानीय व्यवसायहरूका लागि हामी सुझाव दिन्छौं कि एक डोमेन नाम दर्ता गर्नुहोस् जुन तपाईंको ईंट र मोर्टार व्यवसायसँग मेल खान्छ यो एक सुरक्षित दृष्टिकोण हो।
यसमा कुञ्जी शब्दहरूका साथ डोमेन नाम प्रयोग गर्नु के बुद्धिमानी हो?
हाम्रो अनुभवमा, हामीले बुझ्यौं कि सहि मेल खाने कुञ्जी शब्दहरूका साथ डोमेन नाम प्राय: धेरै रूपान्तरण गर्दछ। अब, सम्झनुहोस् कि यो काम गर्नको लागि, तपाईंको डोमेन राम्रो गुणको हुनुपर्दछ। हामी विश्वास गर्छौं कि जब खोजीकर्ताले SERP मा परिणामहरूको माध्यमबाट जान्छ र यसमा कुञ्जी शब्दहरूको साथ डोमेन नाम भेट्टाउँदछ, तिनीहरूले अनचेतपूर्वक त्यो वेबसाइटलाई बाँकी भन्दा राम्रो मान्दछन्।
हाम्रो सर्वेक्षणमा, हामीले पत्ता लगायौं कि यी ग्राहकहरूले तत्काल वेबसाइटहरू वा वेबपृष्ठहरूलाई उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने जानकारीहरू प्रमाणीकरण गर्दछन्। त्यस पछि, तपाईंसँग एक क्लिक गर्नुहोस्, र अधिक ट्राफिक तपाईंको वेबसाइटमा जान्छ।
कीवर्ड डोमेन नाम तपाईंको श्रोताको लागि द्रुत जानकारी स्रोत हुन्। उनीहरूले तपाइँको सम्भावित साइट आगन्तुकहरूलाई भन्छन् कि तपाइँले तपाइँको सबै ध्यान एक विशेष मुद्दासँग व्यवहार गर्नेमा केन्द्रित गर्नुभएको छ। यसले तपाईंलाई उच्च स्तरको पेशेवरको रूपमा आउन मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईं गुणस्तरीय कफी चाहनुहुन्छ भने, के तपाईं "कफी शप" वा "रेस्टुरेन्ट" लाई बढी आकर्षित गर्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा, तपाईं कफि शपको लागि जानुहुने छ किनभने यो कफी प्रदान गर्न बढी समर्पित छ, रेस्टुरेन्ट जस्तो नभई यसको खानाहरू र पेय पदार्थहरूको फराकिलो दायरामा यसको सेवाहरू फैलाउँदछ।
तपाईको डोमेनमा कुञ्जी शब्द राख्नुले तपाईको श्रोतालाई भन्छ कि तपाईसँग उनीहरूको चाहना मात्र होईन तर तपाई त्यस्ता समस्याहरू सम्हाल्न मा विशेष हुनुहुन्छ। तपाईको डोमेन नाममा कुञ्जी शव्दहरू प्राय: र्याकि value मान सुधार गर्न मानिन्छ। यद्यपि यसको मूल्य त्यति हुँदैन।
वास्तविक मूल्य दर्शकलाई आकर्षित गर्नमा निहित छ जुन बिक्रीमा रूपान्तरण गर्ने ठूलो इरादा राख्छ। जब एक ग्राहक तपाइँको लिंक मा क्लिक गर्दछ, असमानता बढी छ कि तपाइँ तपाइँको सेवाहरु वा उत्पादनहरु लाई सन्तोषजनक पाउनुहुनेछ।
छोटो डोमेन नाम, उत्तम
यो Semalt मा सामान्य अभ्यास छ डोमेन नाम सकेसम्म छोटो राख्नको लागि। तीन शब्दहरूको औसत। डोमेन नामको सही अर्थ प्राप्त गर्न हामीले एक भन्दा बढि शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यदि यो त्यस्तो थिएन भने, सम्भावनाहरू हामी एक शब्द प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ।
तपाइँ तपाइँको डोमेन नाम सरल राख्न चाहानुहुन्छ। वास्तविकतामा, कोही पनि तपाइँको डोमेन नामको रूपमा पूर्ण वाक्य पढ्न चाहँदैनन्। धेरै चोटि, चार शब्द भन्दा बढि चीजहरूले थोरै रौंदार बनाउँदछ। हो, यो बिना अरु केहि शब्दहरु प्रयोग गर्न को लागी टाढै रहन सक्दछ, जस्तै "खोज" "इन्जिन" बिना यो सही अर्थमा गर्दैन। जहाँसम्म, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको डोमेन नाम सकेसम्म छोटो छ।
एक अर्थ छ जुन एक डोमेन छ
कहिलेकाँही, यो एक सन्देश पठाउन डोमेन नाम दर्ता गर्न बुद्धिमानी हुन्छ। तपाईको डोमेन नाम तपाइँको वेबसाइटको बारेमा के छ श्रोताहरुलाई भन्न सक्षम हुनुपर्दछ।
त्यहाँ एक प्रवृत्ति हुन्छ जहाँ प्रत्येक डोमेन नामको अन्तमा प्रत्यय "वाच"। डोमेनको उपसर्ग पनि भएको थियो। यो लामो समयसम्म टाँसिएन किनकि यदि तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, "वाच" भन्ने शब्द केही सन्दर्भहरूमा विपरित हुन्छ। जे होस्, यो केहि व्यक्तिहरूले महसुस गरे, जबकि अरूले यसलाई "डोमेन ह्याक" को रूपमा देखे।
"वाच" शब्दको साथ असामान्य एक आगन्तुक जुन डोमेन नामको अन्त्यमा थपिएको थियो "विजेट वाच" देख्न सक्छ र मान्नुहोस् यो एक वेबसाइट हो जुन भर्खरको विजेटहरूमा हेर्दै रहन्छ जुन त्यो साइटको उद्देश्य थिएन।
जब तपाइँको डोमेन नाम छनौट गर्दा, तपाइँले अर्थपूर्ण छनौट गर्नुपर्दछ, र एक तरिका तपाइँ यसो गर्न सक्नुहुनेछ गुणहरू विचार गरेर तपाइँ तपाइँको वेबसाइटसँग सम्बन्धित हुन चाहानुहुन्छ। यदि यसले डोमेन नामको साथ ताल गायो भने, तब तपाईंलाई थाहा हुन्छ तपाईं ट्र्याकमा हुनुहुन्छ।
शब्दहरू लेख्नुहोस् जुन तपाईको दर्शकले सम्झनको लागि तिनिहरु याद गर्नुहोस् जब तिनीहरुले तपाईको डोमेन नाम सम्झन्छन्।
Etcâ € ¦
अब तपाईंको सूची समीक्षा गर्नुहोस् र तपाईंले लेख्नु भएको गुणहरूको लागि समानार्थी शब्द फेला पार्नुहोस्। वरिपरि खेल्नुहोस् जब सम्म तपाईं एक डोमेन नाम फेला पार्नुहुन्न जुन सहि मिल्दो छ।
डोमेन नामहरूमा हाइफन प्रयोग गर्दै
हामीसँग ग्राहकहरू डोमेन नामहरूमा हाइफनहरूको प्रयोगको बारेमा चिन्तित बिरामी परेका थिए। हामी तिनीहरूलाई शान्त गराउँछौं र बताउँछौं कि तपाईको डोमेन नामका लागि हाइफनहरू प्रयोग गर्नु गल्ती हो। तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुहुन्न।
तपाईको डोमेन नामको रूपमा कुञ्जी शब्द राख्नु रँकि forको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। जहाँसम्म, केहि डोमेनहरूले सकेसम्म धेरै कुञ्जी शब्दहरू क्रम्प गर्न कोशिस गर्छन्, जसले तिनीहरूलाई हाइफनहरू प्रयोग गर्न बाध्य पार्दछ। एक पटक तपाईको डोमेन नाममा हाइफनहरू भए पछि, तपाइँको वेबसाइट स्वचालित रूपमा स्पामी र स्केचि देख्न थाल्छ।
यस नोक्सानको अतिरिक्त, तपाईंको डोमेन नाममा हाईफनहरू भएको कुनै फाइदा हुँदैन। त्यसो भए डोमेन नाममा हाइफनहरू प्रयोग गर्न कुनै फाइदा छैन।
बचाव डोमेन पंजीकरण
DDR डोमेन रजिष्ट्रेसन को एक प्रकार हो कि तपाइँको प्रतिस्पर्धा एक डोमेन नाम दर्ता गर्न रोक्दछ कि तपाइँको प्रतिस्पर्धा भविष्य मा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै डोमेन नामको एकवचन र बहुवचन संस्करणहरू दर्ता गर्न सहमत छन् वा असहमत छन्। अन्य, .net, .org, .biz, .info र .us संस्करणहरू पनि दर्ता गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकहरू छन् जसले सामान्यतया अंग्रेजी भाषा बुझ्दछन् भने, यो तपाईंको डोमेन नामको .ca, .co.Uk संस्करणहरू दर्ता गर्न उपयोगी हुनेछ। नोट गर्नुहोस् कि यो अनिवार्य छैन, र तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्न।
जे होस्, यसो गर्नाले तपाईंको प्रतिस्पर्धालाई यी कुनै पनि प्रकारहरू दर्ता गर्नबाट रोक्छ। यदि उनीहरूले प्रयास गरे पनि, प्रकाशकले एक वकिललाई काममा लिने दर्दनाक प्रक्रियामा जानुपर्नेछ र कसैलाई रोक्नु र बन्द गर्न आदेश पठाउनुहोस्। अब, यो केवल एक डराउने रणनीति हो कि तपाइँलाई डोमेन नाम बदल्न को लागी प्राप्त गर्न को लागी, तर तपाईं अस्वीकार गर्न र तपाइँको ब्रान्डेड डोमेन नाम कायम गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो डोमेन नाममा दिमाग बनाउनु अघि विधिवत रूपमा विचार गर्नुपर्दछ। यसैले तपाईंलाई राम्रो-अनुभवी पेशेवरहरूको आवश्यकता छ जसले डोमेन नाम सिर्जना गर्न सक्दछ जुन सदाको लागि रहन्छ। मा हाम्रो ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बोल्नुहोस् Semalt ताकि हामी त्यहाँ तपाईंको सेवा गर्न सक्दछौं। डोमेन नाम छनौट गर्ने साधारणतया साधारण चीज हुँदैन।
हामी तपाइँकाे प्रतिक्रियाकाे प्रतिक्षामा हुनेछाैँ।